Iindaba - uMboniso
Iinkampani zibambelela "kwingqibelelo", "umgangatho wokuqala", "umthengi kuqala" ifilosofi yoshishino, kwinkonzo yodidi lokuqala, ukubonelela abathengi bethu ngenkonzo esemgangathweni.Ngexesha lophuhliso lwenkampani sinyanzelisa ukuveliswa okuqhubekayo, ukuveliswa kweemveliso ezintsha. , iimveliso zenkampani zithunyelwa kakhulu kumazwe aseYurophu, eUnited States, eRashiya nakwezinye iindawo, iimveliso zithandwa kakhulu ngabathengi.
Sikholelwa ngokuqinileyo.Njengoko kujoliswe kwimarike, ukuveliswa kwezinto ezintsha njengamandla okuqhuba, kumgangatho wokuphila, uphuhliso kunye nokukhula, ngokuqinisekileyo siya kuphumelela ingomso elingcono.
Siye sathatha inxaxheba kwimiboniso emininzi yamazwe ngamazwe kunye nekhaya, ngokusebenzisa imiboniso eyahlukeneyo kunye nemisebenzi, kunye nabanye abavelisi be-carbon fiber ukwenza unxibelelwano lobuhlobo kunye notshintshiselwano lokufunda ngokufanayo, ukutyebisa nokuphucula umgangatho wethu wobugcisa, ukuphucula umgangatho weemveliso zethu kunye nomgangatho.
Ifayibha yeCarbon yinto entsha ebaluleke kakhulu namhlanje.Ngokwemfuno yentengiso, imveliso iye yomelela kakhulu, imodulus ephezulu, uphuhliso loluhlu olude kakhulu. amandla kunye nobunzima obulula.Ngenxa yokusebenza okugqwesileyo okubanzi kunye nexabiso eliphezulu elongezelelweyo le-carbon fiber kunye ne-composites yayo, yaziwa ngokuba "igolide elimnyama" ngekhulu lama-21. Idweliswe kuluhlu lwesizwe “lweSicwangciso seMinyaka emiHlanu ye-13” kwaye ithathwa njengoshishino olusakhulayo olunobuchule kuphuhliso olungundoqo lwesizwe. Ngoku iza kuzisa ithuba elikhulu lophuhliso.
I-Carbon fiber composite material (CFRP) "yinani elikhulu kunye noluhlu olubanzi lwezinto ezisisiseko" kunye "nezixhobo eziphambili zeqhinga ezithintela uphuhliso loshishino lokuvelisa" kwisicwangciso sophuhliso "Yenziwe eChina 2025" esetyenziswe yiNgxelo yoMsebenzi weBhunga leSizwe. Umxokelelwane wayo wemizi-mveliso onyukayo nasezantsi ubaluleke kakhulu ekwakhiweni ngokutsha kwenkqubo yemveliso yezixhobo ezintsha zaseTshayina.Bamenywe ngokubanzi ababoneleli, umbutho kunye noshishino/umbutho, imathiriyeli ehlanganisiweyo, i-aerospace, inqwelo-mafutha, ishishini lemichiza, intambo, umbane ombane, uthutho lukaloliwe, iinqwelo zeenqanawa, Iibhulorho, izakhiwo, izixhobo zombane, izixhobo zokuvelisa, inqanawa yoxinzelelo, izixhobo zemidlalo, iiinjini zomoya, kunye neekhompyuter, unxibelelwano, i-elektroniki yabathengi kunye neminye imimandla emininzi, "isixhobo solwazi se-3 c sasekhaya" sifumene ingqalelo enkulu, Uphuhliso kunye nokwandiswa kwelizwe. uqoqosho lunempembelelo eqinisekileyo.Ifayibha yeCarbon yiperile kwisithsaba sezinto ezintsha, kwaye iyimpahla yeqhinga lelizwe.
Icwecwe leCarbon, I-Carbon Fiber Cue Shaft, ICarbon Fiber Square Tube, ICarbon Fiber Telescopic Tube, I-Carbon Fiber Rod, Umbhobho weCarbon Fiber,